Goorma ayay Kooxda PSG ku dhawaaqaysaa Macallinkeeda cusub ee Mauricio Pochettino?? – Gool FM
Goorma ayay Kooxda PSG ku dhawaaqaysaa Macallinkeeda cusub ee Mauricio Pochettino??
Haaruun January 2, 2021
(Paris) 02 Jan 2021. Warar goordhow soo baxay ayaa lagu sheegay xilli ay kooxda Paris Saint-Germain ku dhawaaqayso macallinkeeda cusub ee Mauricio Pochettino.
Wararku waxa ay sheegayaa in gelinka dambe ee maanta oo Sabti ah ay kooxda reer France ku dhawaaqi doonto in Mauricio Pochettino uu yahay tababaraheeda cusub.
Jariiradda L’Equipe ee ka soo baxda Faransiiska ayaa daabacday in Mauricio Pochettino si rasmi ah loogu dhawaaqi doono, isla markaana la soo bandhigi doono isagoo ah tababaraha rasmiga ah ee kooxda PSG maanta oo Sabti ah.
Macallin Pochettino ayaa yimid Magaalada Paris kaddib markii uu sanadka cusub ku soo qaatay magaalada London, waxaana la filayaa inuu tababarkiisii ugu horeeyay kooxdiisa cusub ee PSG la qaadan doono berri oo Axad ah.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo farriin ku aaddan sanadka cusub ee 2021-ka isugu jawaabtay barta Twitter-ka